२०७७ साल जेठ १५ गते बिहीबार
आयात प्रतिस्थापनमुखी बजेट ल्याउन सुझाव
जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवमा करिब ३३ अर्ब बढीको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । बजेटमा कुन क्षेत्रलाई प्रथामिकता दिने, कर्णालीको आबश्यकता के हो ? समुदायको माग के छ ? स्थानीय सरकारको आवश्यकता के हो ? भन्ने...
२९ वैशाख , २०७७ सागर परियार
सल्यानमा नौ सय ९८ जनाको आरडिटी, ४६ जनाको पीसीआर परीक्षण
सल्यान । सल्यानमा हालसम्म नौ सय ९८ जनाको र्यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट (आरडिटी) परीक्षण गरिएको छ । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका सर्वसाधारणहरुको आरडिटी परीक्षण गरिएको हो । परीक्षण गरिएका सबकोै रिर्पोट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।...
२८ वैशाख , २०७७ दिपक शर्मा
लकडाउनको अवधिमा १६ हजार बढी सल्यान भित्रिए
सल्यान । कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को सक्रंमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको अवधिमा सल्यानमा १६ हजार बढी सर्वसाधारण भित्रिएका छन् । चैत १ गतेदेखि हालसम्म १६ हजार ६८ जना सल्यान भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।रोजगारी, अध्ययन...
२६ वैशाख , २०७७ दिपक शर्मा
सल्यानमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जना घाइते
सल्यान । सल्यानमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जना घाइते भएका छन् । जिल्लाको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका १ आपखोली नजिकै मोटरसाइकल दुर्घटना भएको हो । सल्लीबजारबाट जाजरकोट जाँदै गरेको नयाँ अनटेष्ट २२० मोटरसाइकल गए राती दुर्घटना हुँदा जाजरकोट नलगाड नगरपालिका...
किसानलाई जौ र गहुँ टिप्न चटारो
रारा – कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहदा यहाँका किसान खेतबारीमा जौ र गहुँ काट्न व्यस्त छन् । कात्तिकमा छरेको जौ वैशाखको दोस्रो सातासम्म अघिल्ला वर्षमा किसानले भित्र्याइसकेका हुन्थे । यो वर्ष गत चैत ११ गतेदेखि कोरोना...
२५ वैशाख , २०७७ नृपेन्द्रबहादुर मल्ल
झापामा जङ्गली च्याउ खादा दुई जना बिरामी
झापा । झापाको कन्काई नगरपालिकामा जङ्गली च्याउ खादा दुई जना बिरामी भएका छन् । कन्काई नगरपालिका–७ का ४० बर्षीया जानुका लिम्बु र २६ बर्षीय बेनु लिम्बु जङ्गली च्याउ खाँदा बिरामी भएका हुन् । हिजो बेलुकाको खानासँगै जङ्गलबाट टिपेर ल्याएको...
२४ वैशाख , २०७७ निशेष राई
सल्यानमा चट्याङ लागेर एक बालिकाको मृत्यु, पाँच घाइते
सल्यान । सल्यानमा चट्याङ लागेर एक बालिकाको मृत्यु भएको छ भने पाँच जना घाइते भएका छन् । जिल्लाको कुमाख गाउँपालिका ३ चिनालीकी ६ बर्षिया हिमानी रानाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । मंगलबार बिहान घरमा परेको...
२३ वैशाख , २०७७ दिपक शर्मा
जोखिम मोलेर चेक जाँचमा सक्रिय नेपाल प्रहरी
सल्यान । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न प्रयोग गरिने स्रोत साधनको अभावकाबीच सल्यानमा प्रहरीले नियमित काम गरिरहेको छन् । बन्दाबन्दीको घोषणा भएपनि प्रहरीले नियमति गस्ती, पेट्रोलिङ्ग, चेकजाँच गरिरहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रमुख ढकेन्द्र खतिवडाले सुरक्षाको स्रोत साधनको...
लकडाउन उल्लङ्घन गरेका सवारीलाई एक हजार जरिवाना
सुर्खेत । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलिन नदिन जारी लकडाउन उल्लघंन गरेका मोटरसाइकल र अन्य सवारीहरुलाई सुर्खेत प्रहरीले छोड्न शुरु गरेको छ । चैत महिनाभरी लकडाउन उल्लंघन गरेका झण्डै चार सय सवारी साधन छाड्ने प्रक्रिया शुरु भएको जिल्ला प्रहरी...
२३ वैशाख , २०७७ आकाश तारा बयक
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशका सीमानाका एक हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रदेशका सवारी तथा पैदल प्रवेश गर्ने सबै नाका राति १२ः००...
२३ वैशाख , २०७७ रेडियो नेपाल